ဓမ္မဒူတဇေတဝန်တောရ ဆေကိန္ဒာရာမကျောင်းတိုက်မှာ ဇွန်လ ၁၃ ရက်နေ့ကစတင်ပြီး ၂ ရက်ကြာ ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ဆိုင်ရာ သြဝါဒခံယူပွဲနဲ့ အကြိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲကို ကျင်းပမည်ဖြစ် ပါသည်။
“ ၉၆၉ “ ဆိုတဲ့ အက္ခရာအမှတ်အသားဟာ ရတနာ ၃ ပါးကို အထူးပြုထားတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး သင်္ကေတ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဗုဒ္ဓသာသနာကို ညှိးနွမ်း စေနိုင်တဲ့ ကိစ္စတွေ လုပ်ရပ်တွေမှာ အသုံးမပြုကြဖို့ ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ဆိုင်ရာ သြဝါဒခံယူပွဲနဲ့ အကြိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲအပြီးမှာ သဘောတူ ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပဋိပက္ခတွေကို အကြမ်းမဖက်ဘဲ တရားဥပဒေအတိုင်း ငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းဖို့အတွက် ရန်ကုန်တိုင်း မှော်ဘီမြို့နယ်ရှိ ဓမ္မဒူတ ဇေတဝန်တောရ ဆေကိန္ဒာရာမကျောင်းတိုက် မှာ အဲဒီ ဆွေးနွေးပွဲကို ဇွန်လ ၁၃ရက် ကနေ ၁၄ရက်နေ့ အထိ ၂ရက်ကြာ ကျင်းပခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတဝှန်းက ထင်ရှားတဲ့ သံဃာတော် အပါး ၂ဝဝ ကျော် တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီ သဘောတူညီချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သီတဂူ ကမ္ဘာဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်က အရှင်ဒေဝိန္ဒာဘိဝံသ က မိန့်ကြားပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ငြိမ်းချမ်းရေးကိုရှေ့ရှုပြီး သက်ဆိုင်ရာဘာသာအလိုက် ခိုင်မာတဲ့ဥပဒေတွေ ရေးဆွဲပြဌာန်းဖို့၊ ၁၉၈၂ နိုင်ငံသားဥပဒေကို တိတိကျကျလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့၊ နိုင်ငံသားအချင်းချင်း အပြန်အလှန်လေးစားဖို့၊ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ထိခိုက်စေမယ့် အပြောအဆို၊ အပြုအမှုတွေကို ရှောင်ကျဉ်ဖို့၊ ဘာသာပေါင်းစုံ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကနေ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကို တည်ဆောက်ဖို့စတဲ့ အချက်တွေပါတဲ့ ကြေညာချက်တစ်စောင်ကိုလည်း ဆွေးနွေးပွဲအပြီးမှာ သဘောတူထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
၂ ရက်ကြာကျင်းပခဲ့တဲ့ သံဃာဆွေးနွေးပွဲမှာ ပဋိပက္ခတွေကို ဗုဒ္ဓနည်းကျဖြေရှင်းရေး၊ ငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်ရေးအတွက် ဥပဒေဆိုင်ရာကဏ္ဍ၊ နိုင်ငံသားအားလုံး ငြိမ်းချမ်းစွာ နေထိုင်ရေးကဏ္ဍ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဦးတည်တဲ့ ပညာရပ်လေ့လာရေးကဏ္ဍစတဲ့ကဏ္ဍ ၇ ခုခွဲပြီး ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ဆွေးနွေးပွဲကနေ သဘောတူထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ ကြေညာချက်တွေကို အစိုးရနဲ့ နိုင်ငံတော်သံဃာနာယကအဖွဲ့ကို ပေးပို့ဖို့မရှိဘူးလို့လည်း သိရပါတယ်။
အဲဒီဆွေးနွေးပွဲကို ဆရာတော် အရှင်ဆေကိန္ဒ၊ မန္တလေး မစိုးရိမ်တိုက်သစ် ဆရာတော် အရှင်ဝီရသူအပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံနေရာအနှံ့က သံဃာအပါး ၂ဝဝ ကျော် တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
Wirathu is Leader of "969" and he really is Terror. Many of Muslims have been killed crueliy because of his speeches. That is why ' 969 ' is sign of Anti Muslim and Anti NLD.
Jul 17, 2013 07:27 AM
တဲ့ခြင်္သေ့ကို ကိုယ်စားပြုတာလားဟင်.. မစိုးရီမ်ကျောင်းတိုက်ကဆရာ
အမှတ်ဆိုတာ သိပါတယ်၊ ၉၆၉ရဲ့နောက်ကွယ်မှာပြည်ခိုင်ဖြိုးရှိတယ်
Jun 28, 2013 10:27 PM
U Thein Sein still can not capture the rioters, those behind the scene and Kau Lu who is posting creating riots.
“၉၆၉” ဆိုတာ ဂဏန်းသက်သက်ပါ။ တစုံတခုသောရည်ရွယ်ချက်
ကြောင့် ရတနာသုံးပါးဂုဏ်တော်တွေနဲ့ ဆက်နွှယ်ပြီး “ခုတုံး” လုပ် အသုံးချလိုက်တာပါ။ ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ထွန်းကားတည်တံ့ လာတာဟာ ဒီဂဏန်း၃လုံးကြောင့် မဟုတ်ပါဘူး။ “အနန္တ” ဂုဏ်ရည်ကြောင့်ပါ။
The instigator Monk is in the meeting. How can the congregation decide true, good color of Buddhism? It is shameful that he is in the meeting. He himself declares that he isaBurmese Bin La din. His mind is full of hatred. How can he administer his monastery and monks under his watch. He should not be in the meeting. He might be the agent of the government. Who knows?